UYIFUMANA PHI KWAYE PHI I-MANTRA DAO (I-OM) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Uyifumana phi kwaye phi i-MANTRA DAO (i-OM) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 5: Urhwebo lwe-OM
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-OM ngokukhuselekileyo kwizipaji zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lwe-OM
Yintoni iMANTRA DAO (OM)?
IMANTRA DAO liqonga lezezimali elabelwe abaphantsi kwegunya elithile elijolise ngqo ekumeleleni, ekubolekiseni nakwinkqubo yolawulo. Le projekthi yakhiwa kwi-blockchain eRioChain kwaye iya kudityaniswa nePolkadot. Yenzelwe ukuba isebenze njengesixokelelwano sendalo seWebhu 3.0.
Iqonga lisebenzisa ithokheni yokusetyenziswa kwendalo, i-OM, yokuma, ukubolekisa kunye nolawulo. Ngelixa iprojekthi icwangcisa ukufudukela kwinethiwekhi yePolkadot, umqondiso wawukhutshwe okokuqala kwi-Ethereum blockchain.
IMANTRA DAO yabhengezwa okokuqala ngoJuni 2020, kwaye iqonga lahamba lasebenza kunye nenqaku lalo lokuqala, ngo-Okthobha u-2020.
Ngoobani Abaseki beMANTRA DAO?
IMANTRA DAO yaphuhliswa njengeprojekthi yeRioDeFi, inkampani yophuhliso lwetekhnoloji ye-blockchain ngasemva kweRioChain, apho abaseki kunye nabahlobo bexesha elide uJohn Patrick Mullin noWill Corkin babengabacebisi. Aba babini basungule le projekthi njengombutho ozimeleyo ozimeleyo kunye noogxa bakhe uRodrigo Quan Miranda.
UMullin ngaphambili wayeqhuba uphando lwe-fintech kwibhanki yotyalo-mali yaseTshayina iGuotai Junan Securities kwaye wayegubungele iteknoloji ye-blockchain kuzo zombini iindawo zemveli kunye ne-crypto media. NgoSeptemba 2020, wachongwa njengomcebisi weqhinga kwiPolkastarter, utshintshiselwano olusekwe ePolkadot. UCorkin wayekade engusekela mongameli wophuhliso lweshishini kwinkampani yophuhliso lwebhloko yeTrade.io, apho wayesebenza noMullin. UCorkin usebenze kwi-FinTech Connector, uthungelwano lobuchwephesha bokuqalisa i-fintech kunye noosomashishini. Kunye noMullin, ungunozakuzaku wenethiwekhi yePolkadot.
UMiranda waseka i-Moon Street Ventures, uphando lwe-blockchain kunye nenkampani yokubonisana, kwaye waseka kwaye wakhonza njenge-CEO ye-Immutable Technologies Corp, umboneleli weziseko zonxibelelwano. Wayefudula eyibhanki yotyalo-mali.
UMullin, uCorkin noMiranda, kunye ne-CEO yeRioDeFi uJames Anderson kunye negosa eliyintloko lentengiso uStephane Laurent Villedieu, babumba ibhunga elisekayo leMANTRA DAO.
Yintoni eyenza iMANTRA DAO yahluke?
Ngokwe-MANTRA DAO, amanqaku aliqela abhengeziweyo enza ukuba le projekthi yahluke. Okokuqala, iyakhiwa eRioChain kwaye iza kudityaniswa nePolkadot, eyichaze njenge 'blockchain' yesizukulwana esilandelayo. Okwesibini, ibonelela ngokuma okuninzi, ukuboleka kunye nokuboleka kuzo zombini iqonga kunye nezinye ezinje ngeCosmos (ATOM) kunye neTerra (LUNA). Okwesithathu, isebenza ngeMANTRA POOL apho i-25% yemivuzo yesiseko inikwa khona. Kwaye ekugqibeleni, isebenzisa umgaqo-nkqubo 'we-karma' onika amanqaku kwinxaxheba kubathathi-nxaxheba ngokusekwe kwigalelo labo, ukunika abasebenzisi amanqaku aphezulu okunyusa izibonelelo.
Inkqubo yendalo ye-MANTRA DAO inikwa amandla yi-OM, esetyenziselwa ukulawula i-DAO kunye nokuma kunye nokubolekisa. Abanini beethokheni ze-OM bafumana umvuzo oqikelelweyo we-88.8% wokuma eqongeni. I-OM yakhutshwa njengethokheni ye-ERC-20, kodwa iqonga liceba ukufudukela kwinethiwekhi yePolkadot.
Njengoko kucacisiwe kwiphepha layo elimhlophe, isicwangciso seshishini seMANTRA DAO sigxile ekuqokeleleni inzala kwimali mboleko, staking OM, ukuqhuba ishishini lokuma-njenge-nkonzo elibiza iifizi kwii-asethi ezibekiweyo, kunye nokubonelela ngokufikelela kushishino ukuya kwishishini iimveliso. Inani leefemu zotyalo-mali zixhasa 'umnikelo wobulungu wokuqala,' kubandakanya iKenetic Capital, iGenesis Block kunye neNyanga enkulu yeNyanga.
Funda malunga neKhompawundi, elinye iqonga eliphambili lokubolekisa ngeDeFi.
Funda ngoMenzi, ithokheni yolawulo lomnye umbutho ozimeleyo ozimeleyo, uMenziDAO.
Unomdla wokulima isivuno? Funda inkcazo enzulu ngeAlexandria, izixhobo zemfundo ezikwi-Intanethi zeCoinMarketCap.
Hlala usesikhathini malunga nophuhliso lwamva nje kwicandelo leDeFi kunye neBlog yeCoinMarketCap.
Zingaphi iingqekembe zeMANTRA DAO (OM) ezijikelezayo?
IMANTRA DAO inethokheni yonikezelo ngeethambeka ezingama-888,888,888 ze-OM. Kule mali, i-75.6 yezigidi ze-OM (i-8.5%) zathengiswa ngexa le-presale kunye 'nomrhumo wobulungu wokuqala' oqale ngoJulayi 2020. I-80 yezigidi ezongezelelekileyo (i-9%) yabelwa ukuhanjiswa ngasese, ixesha lokufumana iinyanga ezintandathu. .
Iithokheni eziseleyo zahanjiswa ngolu hlobo lulandelayo:
I-155.6 yezigidi ze-OM (i-17.5%) yeqela kunye nabacebisi, ishumi elinesibhozo elinanye liya kusasazwa rhoqo emva kweentsuku ezingama-30.
I-266.7 yezigidi ze-OM (iipesenti ezingama-30) zokufumana umvuzo, uninzi lwayo luya kukhutshwa kwindawo yokukhula engaboliyo emgceni kwisithuba esimalunga neminyaka emihlanu.
Izigidi ezili-111.1 ze-OM (12.5%) yeenkqubo zokudlulisa imali, uninzi lwazo luya kukhutshwa ngokuqengqeleka kwipateni yomgama kwisithuba seminyaka emihlanu.
Izigidi ezingama-88.9 ze-OM (10%) zoovimba, uninzi lwazo luya kukhutshwa ngokuqengqeleka kwipateni yomgama kwisithuba seminyaka emihlanu.
Izigidi ezili-111.1 ze-OM (i-12.5%) yezibonelelo zokuxhasa amaphulo oluleko.
Ngokwe-whitepaper yayo, abasebenzisi bayacelwa ukuba bathumele i-1 OM kwisipaji esilawulwa yi-MANTRA DAO ukuze ungene kwi-MANTRA POOL, iyonke iyakutshiswa ngekota nganye. Nangona kunjalo, ngo-Novemba ka-2020, iprojekthi yathi ayicwangcisi ukutshisa naziphi na iithokheni.
Inethiwekhi ye-MANTRA DAO ikhuseleke njani?
Ithokheni yolawulo lwe-OM ye-MANTRA DAO luphawu lwe-ERC-20 olukhutshwe kwi-Ethereum blockchain, oko kuthetha ukuba ukuthengiselana kwe-OM kungqinisisiwe yinethiwekhi ye-Ethereum. I-Ethereum isebenzisa ubungqina bokusebenza kwemvumelwano algorithm apho abasebenzi basezimayini bakhuphisana phakathi kwabo ukongeza iibhloko ezintsha kwi-blockchain kwaye uninzi lwazo zonke iinethiwekhi kwinethiwekhi kufuneka ziqinisekise irekhodi lokuba iposwe.
Iprojekthi yonyula umnikezeli wokugcina i-Hex Trust njengomgcini wempahla yayo yedijithali, kwaye ngoDisemba 2020, iprojekthi yabhengeza ukuba izivumelwano ezifanelekileyo zokwenza okulandelayo kwethokheni yayo ye-OM ziphicothwe yinkampani yezokhuseleko ye-blockchain SlowMist.
IMANTRA DAO izakufudukela ePolkadot idlula eRioChain, eyayiphicothwa ngoSeptemba 2020 yinkampani yokhuseleko lwe-blockchain yeCertiK, ingafumani siphoso sokhuseleko.
Ungayithenga phi iMANTRA DAO (OM)?
I-OM inokuthengwa ngokutshintshiselana nge-imali yedatha efana neHotbit, i-OKEx, iBithumb yeHlabathi kunye nokuHlanganisa (V2), phakathi kwabanye. Ingathengiswa kwiindawo zentengiso ngokuchasene nedola eNtsha yaseTaiwan, imali yeedigital ezifana neBitcoin (BTC) kunye ne-Ether (ETH), kunye neStarcoin Tether (USDT).
Ngaba unomdla wokuthenga i-OM okanye ezinye i-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin? ICoinMarketCap inesikhokelo esilula, esinyathelo nesinyathelo sokukufundisa konke malunga ne-crypto kunye nendlela yokuthenga iingqekembe zakho zokuqala.
Ixabiso langoku le-OM yi- $ 0.32 kwaye ikwindawo ye-366 kwi-Coinmarketcap kwaye kutshanje inyuse iipesenti ezingama-36.17 ngexesha lokubhalwa.
I-OM idwelisiwe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Ungathenga ngokulula le ngqekembe ngokuthenga kuqala i-Bitcoin kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-OM .
Inkcitho yemali ayiphumelelanga ukukhusela
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-OM yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-OM ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iBinance njengotshintshiselwano lwethu. I-Binance lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
node js thumela i-imeyile
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela kwi-Binance nje ukuba i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-OM!
Kwikholamu elungileyo kukho ibha yokukhangela, ngoku qiniseka ukuba 'i-BTC' ikhethiwe njengoko sithengisa i-BTC kwi-altcoin pair. Cofa kuyo kwaye uchwetheze 'OM', kuya kufuneka ubone i-OM / BTC, ukhethe eso sibini kwaye kuya kufuneka ubone itshathi yamaxabiso e-OM / BTC embindini wephepha.
Apha ngezantsi kukho ibhokisi eneqhosha eliluhlaza elithi 'Thenga i-OM', ngaphakathi kwebhokisi, khetha ithebhu 'yeNtengiso' apha njengoko lolona hlobo luhamba phambili lokuthenga iiodolo. Unokuchwetheza kwisixa sakho okanye ukhethe ukuba yeyiphi na indawo oyithandayo ongayisebenzisa ekuthengeni, ngokunqakraza kumaqhosha eepesenti. Xa uqinisekisile yonke into, cofa 'Thenga i-OM'. Voila! Ekugqibeleni uthenge i-OM!
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-OM yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-OM ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iGate.io njengotshintshiselwano lwethu. UGate.io lutshintshiselwano oludumileyo lokurhweba ii-altcoins kwaye linenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela kwiGate.io nje ukuba i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-OM!
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-OM yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-OM ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iBitMart njengotshintshiselwano lwethu. IBitMart lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC eBitMart kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumelele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u 'Thumela' ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya kwiBitMart!
Ngoku buyela emva kwiBitMart kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwiBitMart nje ukuba i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-OM!
Buyela kwiBitMart, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-OM yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-OM ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iBitForex njengotshintshiselwano lwethu. I-BitForex lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
IBitForex yenye yezo zotshintshiselwano nge-imali yedatha evela elunxwemeni (eSeychelles). Olu tshintsho lolunye lotshintshiselwano abathandathu ababhaliswe eSeychelles. Kwi-imeyile ethunyelwe kubasebenzisi bayo nge-23 ka-Okthobha i-2019, iBitForex yazisa ukuba ngoku banabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-3. Utshintshiselwano lukwanakho nokukhethwa okufanelekileyo kwezibini zorhwebo (izibini ezingama-92 zokurhweba ezahlukeneyo) kunye nemali encomekayo kakhulu. IBitForex ayitsho ukuba abatyali mali baseMelika abanakho ukurhweba apha. Ke, siyakholelwa ukuba abatyali mali baseMelika banokuthengisa apha. Nangona kunjalo, bonke abatyali zimali baseMelika kufuneka benze ezabo izimvo zokuba imigaqo yelizwe okanye imithetho yomanyano iyayichaphazela na imisebenzi yabo yorhwebo lwangaphandle okanye hayi. IBitForex ayitsho ukuba abatyali mali baseMelika abanakho ukurhweba apha. Ke, siyakholelwa ukuba abatyali mali baseMelika banokuthengisa apha.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi yoluntu eyahlukileyo yesipaji sakho se-BTC eBitForex kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumelele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u 'Thumela' ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya kwiBitForex!
Ngoku buyela emva kwi-BitForex kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwiBitForex yakuba iBTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-OM!
Buyela kwiBitForex, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-OM yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-OM ingathengiswa, apha siza kusebenzisa i-HotBit njengotshintshiselwano lwethu. IHotBit yindawo yotshintshiselwano eyaziwayo yokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
Isekwe kwi-2018 kwaye ibambe ilayisensi ye-MTR yase-Estonia, ilayisensi yaseMelika ye-MSB, iphepha-mvume lase-Australia le-AUSTRAC kunye nelayisensi yaseCanada ye-MSB, HotBit yokutshintshiselana nge-cryptocurrency yaziwa njenge-cryptocurrency yokurhweba ngeplatofrm eqhubeka nokukhulisa nokudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zamashishini afana nokuthengisa amabala, iziphumo zezemali Utyalomali lwe-cryptocurrency kunye ne-DAPP kwiqonga elinye. IHotbit ivumela abatyali mali baseMelika okwangoku. Okwangoku, amashishini eHotbit agubungela ngaphezulu kwamazwe kunye neendawo ezingama-210. Ngokusekwe kubuchule bayo obumanyeneyo nobumanyeneyo, iHotBit iyaqhubeka ukugxila kwiimarike ezisakhulayo zehlabathi ezinjengeRashiya, iTurkey kunye neemarike zasemazantsi mpuma eAsia, kwaye yabekwa kwindawo enye kwezona zintathu zotshintshiselwano olwamkelweyo ngamajelo eendaba aseRussia ngo-2019.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC kwi-HotBit kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumelele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u 'Thumela' ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya kwi-HotBit!
Ngoku buyela kwi-HotBit kwaye intloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwi-HotBit xa i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-OM!
Buyela kwi-HotBit, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-OM yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-OM ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iPoloniex njengotshintshiselwano lwethu. I-Poloniex lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye linenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
I-Poloniex yindawo ephakathi yokutshintshiselana kwemali yedijithali kubo bobabini abanamava kunye nabathengisi be-cryptocurrency. Inika uluhlu lweemarike ze-crypto, iintlobo zorhwebo ezihambele phambili, kunye nokuthengisa umda kunye nokubolekwa kwe-crypto, eyenza indawo efanelekileyo kubarhwebi abavela kuzo zonke iindlela zobomi. I-Poloniex yindawo elungileyo kwaye ethandwa kakhulu ebonelela ngeefizi zokurhweba eziphantsi kakhulu, inkxaso elungileyo kubathengi, inkqubo elula yokubhalisa, ii-cryptocurrencies ezininzi, kunye nezinye izinto ezimangalisayo. Njengoko iPoloniex lutshintshiselwano lwemali yaseMelika, abatyali zimali baseMelika banokuthi bathengise khona. Kodwa abatyali mali baseMelika kufuneka nakweyiphi na imeko benze uvavanyo lwabo oluzimeleyo ngazo naziphi na iingxaki ezivela kwindawo abahlala kuyo. Ngokukodwa, abatyali mali abavela kwilizwe laseNew York bahlala bevinjelwe kurhwebo kwiindawo ezininzi zokutshintshiselana nge-cryptocurrency.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona uluhlu lweenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC ePoloniex kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwiCoinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Cofa u 'Thumela' ukuqhubeka, kuya kufuneka ufumane i-imeyile yokuqinisekisa kwangoko, cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile kwaye iingqekembe zakho zisendleleni eya ePoloniex!
phinda wenze iakhawunti ye-cash app
Ngoku buyela ePoloniex kunye nentloko kwi-wallet yakho, ungakhathazeki ukuba awuyibonanga idiphozithi yakho apha. Kusenokwenzeka ukuba iqinisekisiwe kwinethiwekhi ye-blockchain kwaye kufuneka ithathe imizuzu embalwa ukuba iingqekembe zakho zifike. Kuxhomekeka kwimeko yenethiwekhi yokugcwala kwenethiwekhi yeBitcoin, ngamaxesha oxakekileyo kunokuthatha ixesha elide.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa esivela kwiPoloniex yakuba iBTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-OM!
Buyela kwiPoloniex, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho kunokuba yinto eyoyikisayo, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kodwa asikenzi okwangoku. Sifuna ukuguqula i-BTC yethu ibe yi-OM. Njengoko i-OM okwangoku idweliswe kwiPancakeSwap siza kukukhokela ngendlela yokuguqula i-BTC yakho eqongeni. Ngokungafaniyo nolunye utshintsho lwendawo enye amanyathelo okuguqula aya kwahluka kancinci kwiPancakeSwap kuba lutshintsho olusemthethweni (i-DEX) engafuni ukuba ubhalise iakhawunti kwaye ungahambi kuyo nayiphi na inkqubo ye-KYC, nangona kunjalo, ukurhweba kwi-DEX kufuna ukuba ulawule Isitshixo sakho sangasese kwisipaji sakho se-altcoin kwaye kuyacetyiswa ukuba ukhathalele isitshixo sakho ngasese, kuba ukuba ulahle izitshixo zakho, oko kuthetha ukuba uyakuphulukana nokufikelela kwiingqekembe zakho ngonaphakade kwaye akukho nkxaso yabathengi iya kukunceda ufumane izinto zakho umva. Nangona ilawulwa ngokufanelekileyo kukhuselekile ngakumbi ukugcina iiasethi zakho kwisipaji sakho sangasese kunakwizipaji zotshintshiselwano. Ukuba awukonwabisi ukusebenzisa i-DEX okwangoku, jonga ukuba ngaba i-OM iyafumaneka nakuphi na okunye ukutshintshiselana okuqhelekileyo kwindawo yesiqhelo kwithebhu engentla. Ngaphandle koko masilandele la manyathelo ngononophelo.
Ngamafutshane, njengoko i-OM ingumqondiso we-BEP-20 osebenza kwi-Binance Smart Chain, eyona ndlela ikhawulezayo yokuyithenga kukudlulisela i-BTC yakho kwi-Binance (okanye iintengiselwano ezidweliswe kwitafile engezantsi kubarhwebi base-US), uyiguqulele kwi-BNB, emva koko yithumele kwisipaji sakho ngeBinance Smart Chain kwaye utshintshe i-BNB yakho ye-OM kwiPancakeSwap.
Apha kuza elona candelo linzima lenkqubo, ngoku kuya kufuneka wenze isipaji sakho ukuze ubambe zombini i-BNB kunye ne-OM, kukho iindlela ezininzi zokwenza isipaji sakho, olona khetho kukusebenzisa isipaji sehardware, njengeLedger Nano S okanye ULedger Nano X. Zizixhobo ezikhuselekileyo ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iiasethi zakho, kuya kufuneka ugcine amabinzana embewu kwindawo ekhuselekileyo kwaye ungaze uyibeke kwi-intanethi (okt sukufaka amabinzana embewu kuyo nayiphi na inkonzo yelifu / ukugcinwa / imeyile, kwaye musa ukuyifota). Ukuba ucwangcisa ukuhlala kwindawo ye-crypto okwethutyana, kuyacetyiswa ukuba ufumane isipaji sehardware.
Nali inyathelo lokuvelisa ibinzana elilalela, kwiscreen uza kubona uluhlu lwamagama angaqhelekanga emva kokucofa 'ukuveza amagama ayimfihlo', ubhale la magama phantsi ephepheni kwaye ungaze uwagcine kwi-intanethi, naphina. Ukufumana ukhuseleko olongezelelekileyo unokucinga ngokufumana i-Cryptosteel Capsule kwiLedger ukugcina amabinzana akho ngokukhuselekileyo nangokwasemzimbeni.
Ngoku ukulungele ukufaka i-BNB yakho kwisipaji sakho, intloko ukuya kwiPancakeSwap, cofa u-'Dibanisa 'phezulu kwaye ukhethe iMetaMask.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukunxibelelana neMetaMask kuya kufuneka ubuzwe kwangoko ukuba ungathanda ukongeza inethiwekhi yeBinance Smart Chain kwiMetaMask yakho, nceda uqhubeke neli nyathelo kuba kubaluleke kakhulu ukuba uqiniseke ukuba uthumela i-BNB yakho ngenethiwekhi elungileyo. Emva kokudibanisa inethiwekhi, tshintshela kwinethiwekhi kwiMetaMask kwaye uya kuba nakho ukubona ibhalansi yakho ye-BNB kwi-Binance Smart Chain. Ngoku khuphela idilesi kwibhodi eqhotyoshwayo ngokunqakraza kwigama leakhawunti.
Cofa ungenise kwaye ulandele amanyathelo okuqinisekisa emva koko. Emva kokurhoxa ngempumelelo i-BNB yakho kufuneka ifike kungekudala kwisipaji sakho. Ngoku ulungele ukuthenga i-OM ekugqibeleni!
Cofa kwi-Connect Wallet ukuba awukenzi oko. Ngaphandle koko uya kuba nakho ukubona ibhalansi yakho ye-BNB apha ebaleni, ngenisa isixa onqwenela ukusitshintshela i-OM emva koko uye ebaleni, khetha i-OM ukusuka ekuhleni, isixa esihambelanayo se-OM kufuneka sivele kwangoko. Qinisekisa kwaye uqhubeke 'nokutshintsha'. Kwiskrini esilandelayo, qinisekisa ukuthengiselana kwakhona ngokunqakraza Qinisekisa ukutshintsha. Ngoku iMetaMask kufuneka ivele kwaye ikubuze ukuba uyafuna na ukuvumela iPancakeSwap ukuba ichithe i-BNB yakho, cofa uQinisekise. Lindela isiqinisekiso sekrini ide ibonise 'ukuThunyelwa okuThunyelweyo', ndiyavuyisana! Ekugqibeleni uthenge i-OM !! Emva kwexesha elifutshane kuya kufuneka ukwazi ukubona ibhalansi yakho ye-OM kwi-MetaMask Wallet yakho.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-OM yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-OM ingathengiswa, apha siza kusebenzisa i-OKEx njengotshintshiselwano lwethu. I-OKEx lutshintsho oluthandwayo lokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
Kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwi-OKEx xa i-BTC yakho ifikile. Kwaye ngoku ukulungele ukuthenga i-OM!
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela nje ukuba i-OM idweliswe apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-OM yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokugcina zikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kwedilesi esidlangalaleni nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye ugcine ukhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
ukuseta i-ac1200 yoluhlu lwe-wifi extender
Ndingayithenga i-OM ngemali?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-OM eYurophu?
Ngaba akhona amanye amaqonga okuthenga i-OM okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-OM ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-BTC kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-BTC yakho kutshintsho lweAltCoin.
Iinkonzo zeNgingqi yintengiselwano yeontanga ye-Bitcoin. Yindawo yentengiso apho abasebenzisi banokuthenga kwaye bathengise iBitcoins ukuya nokubuya komnye nomnye. Abasebenzisi, ababizwa ngokuba ngabarhwebi, benza iintengiso ngexabiso kunye nendlela yokubhatala abafuna ukuyinikela. Unokukhetha ukuthenga kubathengisi abavela kwingingqi ethile ekufutshane eqongeni. emva kwayo yonke indawo elungileyo ukuba uyokuthenga iBitcoins xa ungazifumani iindlela zakho zokuhlawula oyifunayo naphi na. Kodwa amaxabiso ahlala ephezulu kweli qonga kwaye kuya kufuneka wenze inkuthalo yakho efanelekileyo ukunqanda ukuqhathwa.
Funda ngakumbi kwiziseko zeMANTRA DAO kunye nexabiso langoku apha.
Uyifumana njani ikhowudi yekhonkco kwi-tv ​​yam roku
ndingayithenga phi i-serum
concatenate variable kunye nomtya python
Udliwanondlebe lwenjineli yezamashishini
Icandelo elifunekayo ekuprintweni kwe-pdf kwiincwadi ezikhawulezayo lilahlekile